Taksiyada ku yaal Trabzon ayaa ku noqday Taksi | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Banaadir61 TrabzonTaksiyada ku yaal Trabzon waxay ku noqdaan Taksi
04 / 01 / 2020 61 Trabzon, GUUD, Gobolka Banaadir, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, TURKEY
dolmush barafoobay taksi
Qiimaynta dhibaatooyinka Trabzon ee ajendaha kulanka ayaa ahaa mid casriyeysan. Ömer Hakan Usta, Madaxweynaha Rugta Darawalada iyo Gawaarida, ayaa muujiyay sida uu ugu mahadcelinayo Madaxweynaha Zorluoğlu, isagoo caddeeyay inay rumeysan yihiin in dadka Trabzon iyo dukaanleyda ay ku farxi doonaan isbadalka.
WAA IN AAN U HESHO INUU BIXIYO ADUUNKA Wanaagsan
Hakanmer Hakan Usta, Madaxweynaha Rugta Darawalada iyo Gawaarida, ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin howsha casriyeynta ee baska. “Dhibaatooyinka qaar ayaa ka dhacay howsha isbadalka Trabzon kahor. Sidaa darteed, jawi amni-darro ayaa la sameeyay. Si kastaba ha noqotee, ka dib wadatashiyadii Duqa Magaalada Murat Zorluo withlu nala yeeshay, jawigan xasilooni darrada ayaa la waayey. Degmadeenna Magaalo-Weyne waxaanan isku dayeynaa inaan u adeegno ugu wanaagsan dadka Trabzon. Waxaan higsaneynaa inaan gaarno go'aan sax ah dadka Trabzon iyo dukaameeysatada. ” Xubnaha guddiga agaasimayaashu waxay cadeeyeen inay ka gaabiyeen bilowga howsha waxayna cadeeyeen in su aalaha maskaxdooda laga saaray shirarka ay la yeesheen Dowlada Hoose. Xubnaha guddiga agaasimayaasha ayaa muujiyey sida ay u aaminsan yihiin in go'aanka saxda ah loo qaadan doono Trabzon iyo naftooda, waxayna uga mahadceliyeen Madaxweynaha Zorluoğlu tixgelinta dhammaan dalabkooda.
37 LA SAMEEYAAN 74 TAARIIKHUHU WAA
Duqa magaalada Murat Zorluoğlu wuxuu cadeeyay inuu taxadar ka muujiyey inuu la yimaado wadayaasha darawalka wuxuuna yiri: orum waan kugu mahad celinayaa casuumadaada. Waxaan ka shaqeynay waxaan ka qaban karno dhibaatada gaadiidku ilaa maalintii aan xafiiska la wareegeen. Ugu horreyntii, go'aankii guddiga taraafikada ee la qaatay 2002, waxaa jiray qodob la xiriira u rogidda gawaarida yar yar ee tagaasida. Mudo kadib waxaa la codsaday in la dhaqan galiyo qodobadan, laakiin dalabkaas lama soo afjarin. Go'aan ayaa laga gaadhay shirkii ugu dambeeyay ee UKOME. Go'aankan, 37 dolmuş, 74 taksi ayaa loo beddelay. Tani waxay ahayd tillaabadii ugu horreysay waxayna sidoo kale muhiim ahayd marka la eego muujinta in ay tahay degmad fulisa ballanqaadkeenna ay sameeyeen degmadeenna ”.
WAQTIGII LAGU QAADAY MAGAALADA
Duqa magaalada Zorluoğlu wuxuu sheegay inay kujiraan daraasad deg deg ah oo ku saabsan casriyeynta minibus. Waxaannu shirar wada jir ah qabannay oo aan hawshan ku qabanay heer aad u sareeya marka la eego wadatashiga. Waa waqtigii go'aan la gaari lahaa. Dadkeenna, milkiilayaasha gawaarida, darawalada waxay si cad u doonayaan natiijo faa'iido leh dhammaan Trabzon. Waa geedi socod adag, qof walbaa wuxuu rabaa inuu kudhaqmo danahiisa ugu wanaagsan, taas oo ah wax iska caadi ah. Dhinacna way iska cadahay inaysan sidan dambe ku sii socon doonin. Iyadoo la raacayo go'aanka la gaarayo, waxaan rabnaa inaan gaarno casriyeynta minibus sida ugu dhaqsaha badan ”.
Bursa dolmuşçılar wuxuu u rogaa khadka T1 taraafikada taksi si dön dm looga dhigo
Tareenada nukliyeerka ayaa soo laabanaya
Ku noqo halyeeyga Orient Express
Casriyeynta gawaarida yar yar
Taksi waxay ku noqotaa Taksi
Ganacsade Darawal Trabzon
Rugta trabzon darawalada iyo gawaarida